Nhau - kuchengetedza chinangwa chekutanga uye kutsvaga kumwe kusimudzira
kuchengetedza chinangwa chekutanga uye kutsvaga kwakawanda kukura
VaMeng Lingwen vanogara vachibvunzwa kuti "Bhizinesi rakavambwa sei newe uye rakapinda mumusika wepasi rose sezvo uri amateur webiotechnology munda" .Akataura munguva pfupi kuti "Ita zvakanaka, Usabvunze nezve ramangwana". Akatitsanangurira, zvichibva pane zviripo uye tichiita nehana zvinhu zvese zvidiki zviri pamberi pedu kana isu, tinogona kufambira mberi zvishoma nezvishoma nhanho nhanho, uye kuva nechivimbo nesimba rekutarisa pane ramangwana. Kechipiri, vatungamiriri vekambani vanofanirwa kuve nehunhu hwakanaka uye nepfungwa yekutarisira. Iko kusimudzira kwakasimba kwemabhizinesi kunoenderana nemutemo wakanaka wenyika, uye kuvimba nerutsigiro kubva kuruzhinji rwevanhu. Kana iyo bhizinesi ikakura zvakanaka, inozodzosera kumashure kunzanga. Kana nzanga iri munyatwa, naizvozvowo zvinobatsira neakanakisa
Iko kusimudzira kwakanaka kwebhizinesi kwakazivikanwa neese madanho ehurumende dzemunharaunda. Muna 2015, zvakazivikanwa se "Hebei Science uye tekinoroji maSME" neDhipatimendi resainzi uye tekinoroji yeProvince yeHebei; Muna 2016, zvakazivikanwa Hebei Credit Promotion Association uye Hebei Credit Research Institute se "chibvumirano kugara uye chikwereti vachikoshesa zvebhizimisi muna Hebei Province"; MunaFebruary 2016, yakanga yapfuura ISO13485 system certification uye yawana chitupa cheEC; Kubva 2018 kusvika 2019, kambani yakateedzana yakahwina hunyanzvi uye kuita bhizimusi Hutungamiri Mubairo wakaburitswa neGaobeidian mataundi ehurumende; Muna 2019, yakahwina kubvumirwa kweyemhando yepamusoro bhizinesi rakaburitswa neHebei Provincial department resainzi uye tekinoroji; Muna 2020, zvakange zvakurudzirwa se "Hebei '3.15' yemhando yebasa rekuvimbika ratidziro yuniti"
Pasi pehutungamiriri hwaVaMeng Lingwen, PRISES Biotechnology inoramba ichiwedzera simba rayo pasocial, papfudzi basa rayo rezvemagariro uye inogadzira kukosha kwenzanga. Zvichakadaro, isu ticharamba tichifambirana nenguva uye tichidzidza tekinoroji yepamberi, kuita zvakadzama kutsvagisa nezvekurapa kwemusika wekurapa, kunyatso kudzora mhando yechigadzirwa, kukudziridza simba nyowani nyowani, kugadzirisa simba redu rechiratidzo, kusimbisa chiratidzo chedu, nekuwedzera musika wepasi rose, rega zvigadzirwa zveChina "zvakangwara" zviende kune nyika！
Post nguva: Chivabvu-26-2021